फिचर Archives - Purbeli News
‘शिरिषको फूल’ नाटक पोखरामा मञ्चन हुँदै
पोखरा / मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास शिरिषको फूललाई नाटकमा देखाउन लागिएको छ । बिहीबार पोखरा थियटरको गन्धर्व नाटकघरमा नाटक मञ्चन गर्न लागिएको हो । २७ चैतसम्म मञ्चन हुने नाटकको निर्देशन अञ्जान प्रदीपले गर्नेछन् । थिएटर मल र पोखरा थिएटरको सहकार्यमा हरेक दिन साँझ ५ बजे नाटक मञ्चन हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ । शनिबार भने दिउँसो १ बजे पनि देखाइने छ । क...
पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्रसंग मेनुकाकाे भ्यालेन्टाईन पोज (तस्विरहरू)
इटहरी /भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवसको अवसरमा पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र तामाङले मोडल मेनुका माझीसंग स्पेशल फोटोसुट गराएका छन् । थ्री स्टार क्लबबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागि भएका तामाङ फुटबल छोडेपछि व्यवसायका अलवा मोडलको रुपमा बिभिन्न तस्वीरहरुमा देँखिदै आएका छन् । त्यस्तै ‘धान गहु होता हे’ गीतबाट म्युजिक भिडि...
डायस्पोरामा उदाऊदै गरेको एउटा प्रतिभा नरमान राई
साहित्य, संगीत अनि कला साचै जीवनलाई नजिकबाट बुझ्ने एउटा माध्यम हो भन्दा फरक नहोला ! हरेक व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनैप्रतिभा लुकेको हुन्छ ! आफु भित्र रहेको प्रतिभालाई आफैले चिन्न जरुरी छ यदि आफुले चिन्न सकिएन भने अरुलाई चिनाउन पनिसकिन्दैन ! यदि जीवनलाई कलात्मक बनाउन सके जिवन हुनुको अर्थ हुन्छ नत्र त क्यकटस जस्तो ज़िन्दगी बाच्नु पर्छ ! त्यसो त मान्छेकोज...
पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र संग भावनाको रोमान्टिक भ्यालेन्टाईन पोज (फोटो फिचर)
इटहरी । पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र तामाङले भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर स्पेशल फोटोसुट गराएका छन् । प्रेम दिवसको अवसर पारेर तामाङले मोडल भावना मगरसँग फोटो खिचाएका हुन् । थ्री स्टार क्लबबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागि भएका तामाङ फुटबल छोडेपछि मोडलको रुपमा तस्वीरहरुमा देँखिदै आएका छन् । स्पर्श बुटिकको डिजाइनमा देखिएका ...
तस्विरहरूमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीकाे बिवाह
इटहरी/ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका छन् । मुख्यमन्त्री राई र मिस मंगोल २०१८ की विजेता जाङमु शेर्पाले आज माघ ११ गते लगनगाठो कसेका हुन् । विवाह समारोहबाट केहि तस्वीर सार्बजनिक भएसंगै राई दम्पतिलाई बधाईको ओईरो लागिरहेको छ । काठमाडौँमा विवाह लगत्तै प्रदेश १ राजधानी विराटनगरमा विवाहको शुभकामना तथा प्रितीभोज कार्यक्...
स्विमिङ ड्रेसमा बोल्ड अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी, गरिन् गर्मिलाई बिदा
काठमान्डाैं / लक्डाउनका कारण आम सर्वसाधारण देखि सेलिब्रेटीहरु पनि घर भित्रै बस्न बाध्य भए । हालसम्म पनि कोरोनाको त्रास झन झन बढ्दै गईरहेको छ । तर, दैनिक गुजारा टार्न अहिले भने सुरक्षित भै आम जनमानस बहिर निस्किन थालेका छन् । यता, गर्मी भुलाउन कोहि बाहिर निस्किन पाएनन्, कारण कोरोना । पछिल्लो केहिदिन यता साझ बिहान चिसोको आभास हुन थालेको छ । स्विमिङ पु...
काठमाडौँ / युवा पुस्ताको मोडलिङ क्षेत्रमा आकर्षण बढेसँगै अवसर र चुनौतीहरु समेत थपिदै गएका छन । युवा पुस्ताको सर्बाधिक रोजाइमा परेको मोडलिङ क्षेत्र दिनानुदिन फैलिदै गएको छ । त्यस्तै मोडल/नायिका बन्ने चाहना लिएर मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरेकी मोडल हुन् बिपना चुनारा । नृत्य तथा अभिनयमा पोख्त मोडल बिपना चुनारा सुन्दर मुहार र आकर्षक शर...
काठमाडौँ/ लोकप्रिय नायिका रेखा थापा आफ्नो कलाका कारण बेला बेलामा चर्चामा आइरहिन्छन् । कहिले राजनीति, कहिले प्रचण्डसँगको नृत्य, पार्टी परिवर्तन, बौद्धिक बहस, फिल्म निर्माण, लगायतका विषयमा चर्चा कमाएकी यि सुन्दरी नायिका यतिबेला भने आफ्नो पुस अप पोजको तस्विरका कारण फेरी एक पटक चर्चामा आएकी छन् । शरीरको माथिल्लो भागमा कुनै कपडा नलगाएका पुरुष रेखाको ...
हेर्नुस् गायिका सोना अमात्यको ब्युटी लुक्स (फोटो फिचर)
ईटहरी/ सांगीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल नाम हो गायिका सोना अमात्य। दर्जनौ चर्चित गीतहरु नेपाली सांगीतिक बजारमा पस्केर लाखौ दर्शक श्रॊताहरुको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी सोना आफैमा चर्चित तथा स्थापित नाम हो । काठमाडौँ महानगरपालिका डल्लुमा जन्मिएकी गायिका सोना अमात्य सानै उमेर बाट संगीतमा रुचि भएकाले छ वर्षको उमेरदेखि शास्त्रीय संगीत सिक्न थाले...
हंगकंग / हंगकंग र गएको शनिबार हंगकंगको ब्लु ओसन रेस्टुरेन्टको हलमा आयोजना भएको ज्योती साँगीतिक साँझ हङकङूमा नेपाल बाट आएकी चर्चित लोक गायिका ज्योति मगर र चर्चित डान्सर सुष्मिता शाहीले हंगकंगका दर्शकहरुलाई भरपुर मनोरंजन दिए । जिम्बाल बाउ कि छोरी , उहीँ मुला को सिन्की , पिरतीमा दम छ लगायतका आफ्ना करीब १ दर्जन चर्चित गीतहरु संगै नया गीत जाली रुमाल गा...